Manicure set - kedu ihe ọ bụla bụ maka? | Bezzia
Susana godoy | 20/06/2022 10:06 | Mma
Ọ na-amasị anyị ka aka anyị na-adị ọcha mgbe niile, n'ihi na ha na-ekwukarị ọtụtụ ihe gbasara onwe anyị. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-anwale ụdị dị iche iche nke aghụghọ na agba, ọ bụ oge ikwu okwu banyere nhazi manicure. Ị maara ihe nke ọ bụla n'ime ngwá ọrụ ya bụ maka?
N'ihi na ọ gaghị abụ nke mbụ anyị zụtara a nhazi manicure ma anyị chere na ọ bụghị ihe niile anyị ga-enweta otu egwuregwu. Ya mere, tupu anyị eruo ụzọ, ọ ka mma mgbe niile ịmara ihe a ga-eji nke ọ bụla n'ime iberibe ya mee ihe na n'ezie site na mgbe ahụ gawa, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ okpukpu abụọ.
1 Ntọala manicure: ntu ntu
2 The cuticle pusher ngwá ọrụ
3 Cuticle nippers na mkpa
4 ntu nippers
5 mma aji
6 Ngwa ejikọtara ọnụ
Ntọala manicure: ntu ntu
Otu n'ime ngwá ọrụ anyị na-ahụkarị na nhazi ọ bụla manicure bụ nke a. Ọ nwere ọdịdị triangular n'elu ma ọ bụ eziokwu na ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-ama ihe ọ bụ, ma anyị ga-agwa gị na ọ bụ iji hichaa mbọ. N'ihi na mgbe ịkpụcha ma ọ bụ deba ha, ụfọdụ unyi nwere ike ịgbakọta n'okpuru ha na ngwá ọrụ a nwere ụzọ zuru oke isi wepụ ya. Ị na-eji ya ugboro ugboro?
The cuticle pusher ngwá ọrụ
N'ihi na anyị ekwesịghị mgbe niile ịkpụ cuticles nke mbọ. Enwere ọtụtụ oge mgbe anyị gara nweta ịkpụ ntutu na anyị na-ahụ ka ebe mara mma nwere ngwá ọrụ ịkwanye cuticle na-ewepụghị ya. Iji mee nke a, ị ga-achọ ngwá ọrụ nwere spatula ma ọ bụ ngaji udi, gburugburu n'elu. Ya mere, a ga-ewepụ cuticle ahụ, karịsịa mgbe mpaghara a siri ike. Ugbu a ọ ga-abụ oge ịmalite iji manicure anyị n'onwe ya!
Cuticle nippers na mkpa
Ọzọkwa maka cuticles anyị ga-enwe isi ngwaọrụ abụọ. N'otu aka ahụ, mkpa isi, nke ga-abụ ndị nwere ndụmọdụ kachasị mma na nke kachasị mma, yana njedebe agbagọ. N'ezie, naanị site n'ịhụ ha, anyị ga-ama na-achọpụta ihe dị iche na-emebu mkpa. N'ihi na ndị a dị gịrịgịrị ya mere a na-achọ naanị ịkpụ cuticles. Mgbe pliers na-arụkwa otu ọrụ dị ka mkpa, mana ọ na-enwe ihu dị nkọ karị na-enwe ike bee kwuru akpụkpọ.
N'ezie, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka cuticle nippers, anyị achọghị ka ahapụkwa ntu nippers n'azụ. Ha zuru oke ka ha nwee ike ịkpụ na kwa ịkpụzi mbọ. Ma e bu n'obi maka ntu ndị ahụ buru ibu, ma n'aka na ụkwụ. Ya mere, ka ọ ghara imebi ebe a ga-emeso ya, cheta na a na-eji ya naanị na nke a mgbe enwere ebe ntu dị denser nke na-enweghị ike ịkpụ ya na mkpa.
E nwere ngwá ọrụ ọzọ anyị nwere ike ghara iji nke ukwuu, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ ọ ga-abụ isi. Mgbe anyị nwere akpụkpọ anụ nke kewapụrụ ntakịrị na mpaghara ntu, anyị ga-eji mma a. N'agbanyeghị na ọ naghị eme ka mma dịka anyị si mara ya. Ọ gbasara isi nke nwere agụba dị mma, dị ka mbo dị larịị. Naanị site n'ịgafe ya, anyị ga-ewepụ akpụkpọ anụ ndị ahụ ewepụla, na-enweghị nnukwu nsogbu. Mgbe ụfọdụ, n'ime nhazi manicure anyị na-ahụ nke ọzọ yiri nke ahụ mana nke ahụ nwere udi 'V'. Ha abụọ nwere otu ọrụ.
Ngwa ejikọtara ọnụ
Mgbe ụfọdụ anyị na-ahụkwa otú Otu ngwá ọrụ ahụ nwere isi abụọ, kama ịbụ naanị otu. Ma ọ dịghị ihe ga-eju anya n'ihi na ọ ga-enwe otu nzube dị ka ụfọdụ n'ime ndị anyị na-ekwu okwu. Ya bụ, enwere ike ịnwe nke na-ehicha mbọ ma na-akwagharị cuticles n'otu oge ahụ. Yabụ na naanị ngwa a, anyị nwere ike ịrụ ọrụ abụọ n'otu oge.
Ọ na-aga n'ekwughị na faịlụ ntu ga-apụtakwa na nhazi manicure, nke anyị niile maara nke ọma, yana tweezers na ọbụna ntu ntu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Manicure set - kedu ihe ọ bụla bụ maka?